Madaxweynaha Dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo xilkiisa iska casilay – Walaal24 Newss
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo maalmahan danbe cadaadis dhanka Siyaasada ah heystay ayaa Habeenkii Arbacada khudbad Qaran uu ka jeediyay Telefishinka ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa, Madaxweyne Zuma ayaa heystay Cadaadis uga imaanayay xubnaha xisbigiisa ANC.
“ Waxaan halkaan u imid go’aan ah inaan is casilo waliba sida ugu dhaqsiyaha badan,” ayuu Mr. Zuma ka sheegay magaalada Pretoria”, 75-jirkan ayaa waxaa saarnaa caddaadis ballaaran oo ah inuu xilka ku wareejiyo Madaxweyne ku xigeenka Cyril Ramaphosa, kaas oo ah hogaamiyaha cusub ee xisbiga ANC-da.
Jacob Zuma ayaa xilka Madaxweynaha Koonfur Afrika soo hayay tan iyo 2009, waxa uuna wajahayaa eedo dhowr ah oo musuq maasuq, iscasilaaddiisa ayaa waxa uu Zuma ku soo beegay dhammaadka khudbad dheer oo uu ku sheegay inuu aad uga soo horjeedo qaabka xisbiga ANC isaga ula dhaqmay.
Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Koonfur Africa Cyril Ramaphosa oo isagana dhawaan la doortay ayaa la filayaa inuu noqdo siihayaha madaxweynaha maanta oo khmaiis ah, waxaana madaxweyne cusub lagu soo dooranayaa 30-cisho gudahood,balse Wasiirada howlahooda wey sii wadan doonaan.
Wasiir Goodax oo maalintii labaad kormeeray goobaha ay ka socdo imtixaanka shaadiga
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galay janaasada askari ku shahiiday howlgallada ciidanka ee ka socda Shabeelada Hoose